Lil creek side Cabin kwi edumileyo "Route 66".
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMax
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uMax iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Yonwabela amava enkampu (nceda uze nelinen zakho/ibhedi/iitawuli ezingaqukwanga) kwindlwana yethu entle kakhulu, encinci eyomileyo. Kwipaki entle esekwe RV, kuhola wendlela odumileyo "Route 66".
Ukusetwa kwelizwe elizolileyo kunye nokufikelela kwintlambo ehamba kwipropati. Ineveranda encinci yokuhlala ngaphambili enezitulo kunye ne-grill yokupheka ngaphandle. Ukufikelela kwiGazebo ecaleni kwekhabhathi, kunye nendawo yokuhlamba impahla, kunye neshawari / indawo yokuhlambela iinyawo kude.
Umsingathi weyure ezingama-24 ukwenza ukuhlala kwakho kube kokulungileyo.
Ikhabhinethi ine-futon couch / bed, Ubushushu kunye ne-a/c, iTV, iDVD player, imicrowave, ifriji encinci, iWI-FI.
Umbono omnandi we "Route 66" endala.
Nceda uze nelinen zakho/ibhedi/iitawuli azifakwanga.
Singaphandle kwemida yesixeko saseBristow ukufikelela ngokulula kwiindawo zokutyela, iivenkile, iWalmart, i-casino, ipaki enechibi, iinkundla zentenetya, igalufa yeFrisbee, ukuthengwa kwezinto zakudala phakathi kweevenkile ezininzi ezinobuncwane, kunye nebala legalufa lasePerry Maxwell.
Sinabasebenzi kunye neyure ezingama-24 zokusingatha ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi, kunye nabatyeleli abaninzi ababuyayo minyaka le. UMax kunye/okanye uConnie uya kuba ekho ukuze akuncede nangayiphi na indlela esinokuyenza ngayo.